Plugin PostPost ho an'ny WordPress nohavaozina | Martech Zone
Alahady, Jona 14, 2009 Alahady, Novambra 16, 2014 Douglas Karr
Ity lahatsoratra ity dia notohizana. Betsaka ny trano fitehirizana - ny iray hitako fa tsara dia tsara Aorian'ny atiny.
Ny iray amin'ireo plugins malaza indrindra novokariko ho an'ny WordPress dia PostPost. Betsaka ny olona maniry ny hampanjifa ny pejiny, ny hafatra ary ny fahana azy fa ny fanaovana izany avy ao anatin'ny tonian-dahatsoratry ny lohahevitra dia mety ho sarotra. Ity plugin ity dia ahafahanao manoratra atiny alohan'ny na aorian'ny lahatsoratra amin'ny pejy iray, pejy rehetra, na amin'ny feed-nao fotsiny.
Vao tsy ela akory izay, nanao fizarana fifaninanana tamin'ny alàlan'ny sakafoko aho ary tonga mora raisina ny plugin! Nametraka hafatra aho alohan'ny toerana famahanako ho an'ny olona handefa ahy mailaka amina lohahevitra manokana. Ny mailaka voalohany azoko dia mandrotsaka famandrihana $ 125 amin'ny magazine .net, magazine mahafinaritra iray izay mandrakotra lohahevitra taonina amin'ny teknolojia an-tserasera (sy marketing). Andro vitsy taty aoriana, nanambara ny mpandresy tamin'ny alàlan'ny plugin ihany koa aho!
PostPost dia mamela anao hampiasa vola amin'ny is_feed, is_page ary is_single asan'ny WordPress nefa tsy mila mahatakatra ny fomba fanovana ny lohahevitrao na ny kaody soratanao. Sintomy ny PostPost avy amin'ny pejy Plugin.
Matetika aho tsy manavao plugin raha tsy hoe nahazo tamberina iray taonina ho an'ny endri-javatra iray na manandrana mianatra zavatra vaovao aho. Amin'ity tranga ity dia te hampiditra jQuery izay ampiarahina amin'ny WordPress aho. Tsy tsotra araka ny nieritreretako azy anefa izany. Voalohany, tsy maintsy nampidiriko ilay rafitra tamin'ny plugin miaraka amina fampiasa WordPress PHP manokana:
Ao anatin'ny kaody jQuery, misy fanovana madinidinika ihany koa. Matetika, ny antso hanombohana jquery dia matetika no soratana toy izao:
$ (Antontan-taratasy) .ready (asa ()
Ao anatin'ny WordPress dia toa izao:
jQuery (antontan-taratasy) .ready (asa ($)
Tetikasa nahafinaritra ity ary tena nanjary namboarina! Mazava ho azy, nanampy fehezan-dalàna vitsivitsy ihany koa aho hamoahana ny fahinan'ny bilaogiko ao anatin'ny pejin'ny fitantanan-draharaha - plugin maimaim-poana izany, koa maninona raha mampiroborobo ny bilaogiko ho takalony.
Tags: aorian'ny atinyaorian'ny plugin anatinyaorian'ny lahatsoratralahatsoratra mandefapostpostpostpost pluginplugin WordPress
Ny banga amin'ny teknolojia marketing?
Jun 14, 2009 ao amin'ny 6: 07 PM
Antony iray hafa itiavana ny WordPress. Misaotra!
16 Nov 2014 amin'ny 8:56 maraina
ahoana no ahafahako misintona an'ity plugin ity? "Https://martech.zone/projects/postpost/" tsy mandeha ity pejy ity
16 Nov 2014 tamin'ny 12:41 PM
Najanona io plugin io. Betsaka ireo tsara tohana ao amin'ny trano fitehirizana - zahao Aorian'ny atiny.